Maung Ba Kaung: ကပ်ပါးကောင်များနှင့် လူ
ဆယ်တန်းကျောင်းသား ဘဝ သတ္တဗေဒဆရာမက ကပ်ပါးကောင်(parasite) များ အကြောင်းသင်ခဲ့ဘူးသည်။ ကပ်ပါးကောင်ဆိုကာ လက်ခံကောင် တစ်ခုအပေါ်မှာ အမှီသဟဲ ပြုပြီး ကြီးထွား ရှင်သန်ကြရတဲ့ သဘောမှာ ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။ လက်ခံကောင် မရှိရင် သို့မဟုတ် လက်ခံကောင်က လက်မခံရင် ကပ်ပါးကောင်ဆိုတာ တကယ်တော့ ဘယ်ဖြစ်တည်နိုင်မလဲ။ ဒါဆိုရင် လက်ခံကောင်က အဓိကမဟုတ်ပေဘူးလား။ ကိုယ့်ကို ကောင်းကျိုးပေးမည့် ကပ်ပါးကောင်လား၊ ဆိုးကျိုးပေးမည့် ကပ်ပါးကောင်လား ဆိုတာ ခွဲခြားသုံးသပ်ဖို့ စွမ်းရည်တစ်မျိုးတော့ လိုမှာပေါ့။
စိတ်အာရုံကို ဖြတ်ကနဲ လှုပ်နှိုးလိုက်သလို ခံစားလိုက်ရပြီး ဒီကနေ့ အလုပ်သွားရအုံးမှာပဲလို့ အသိက အာရုံထဲမှာ ရောက်လာတယ်။ လေးလံနေတဲ့ မျက်လုံး အစုံကို အသာအယာ ဖွင့်လိုက်တယ်။ ဒီနေ့က သောကြာနေ့ ပါလားဆိုတဲ့ အတွေးက ချက်ချင်း ဝင်လာလို့ ရုတ်တရက် စိတ်ထဲမှာ ပေါ့သွားတယ်။ သောကြာနေ့ဆိုတာ အလုပ်နားရက်တွေ မတိုင်ခင် ရက်ကောင်းတစ်ရက် မဟုတ် ပေဘူးလား။ အိပ်ရာထဲကနေ အသာအယာ ထလိုက်တယ်။ မီးဖိုခန်းထဲမှာတော့ ဇနီး ဖြစ်တဲ့ သူရဲ့ မနက်စာ ပြင်ဆင်နေတဲ့ အသံ၊ မနက်တိုင်း စားတဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲအနံ့က မရိုး မအီ နိုင်အောင် သင်းပြန့်နေလေရဲ့။ သောကြာနေ့ ဆိုပေမယ့်လည်း နေ့တစ်ဝက်တော့ အလုပ် လုပ်ရအုံးမှာပဲ။ အခုလို ပွင့်လန်းတဲ့ နွေရာသီ ရောက်လာပြီ ဆိုရင် တော့ အလုပ်ချိန်တွေ သက်သာလေ့ ရှိတယ်။
အလုပ်သွားမယ်လို့ အကုန်ပြင်ဆင်ပြီးမှ အိမ်ကထွက်လို့ မရဖြစ်သွားသည်။ သူ့ စိတ်ထဲမှာ တခုခု လိုနေတယ်လို့ ရုတ်တရက် ခံစားလိုက်ရတယ်။ နောက်မှ သူသိလိုက်သည်။ နှစ်ရှည်လများ စွဲကပ်နေသော သူ၏ရောဂါ ပိုးကောင်များကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူ့တွင် အမည်းရောင် သားရည်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ကပ်ပါးကောင် တစ်ကောင်ရှိသည်။ ထိုအကောင် မပါပဲ သူ အိပ်က ထွက်လို့ မရ။ ထိုကပ်ပါးကောင် သည် သူ၏ ဘောင်းဘီ အိပ်ကပ်၊ အင်္ကျီအိပ်ကပ်တို့ တွင် တွယ်ကပ်နေ့လေရှိသည်။ ကပ်ပါးကောင် ဆိုသည့် အတိုင်း သူ့ ခန္ဓ္ဓာကိုယ်တွင် တွယ်ကပ်မှီခိုနေသည့် အပို တစ်ခုဖြစ်လေသည်။ သို့ရာတွင် အနှီးကပ်ပါးကောင်းသည် သူ၏ ပိုက်ဆံများ၊ အကြွေးဝယ်ခွင့် ကပ်ပြားများနှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စဉ် ကပ်ပြားကိုတော့ ထိန်းသိမ်း ထားပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် သူသည် ယနေ့ထိတိုင် ထိုကပ်ပါးကောင်ကို မစွန့်ပစ်နိုင်သေးချေ။ သူသည် ထိုကပ်ပါးကောင်ကို ယူလိုက်သည်။ ထို့ နောက် ဘောင်းဘီအိပ်ကပ် အထဲသို့ ထိုးထဲ့လိုက်ပြီးနောက် ခန္ဓ္ဓာကိုယ်တွင် အလေးချိန်တစ်ခု ထပ်တိုးလာသည်ဟု ခံစားလိုက်ရသည်။ ထို့နောက် ကားသော့ကို ကောက်ကိုင်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ဇနီးသည် အဆင်သင့်ပြင်ထားပေးသော ထမင်းဘူးကို ကောက်ယူလိုက်သည်တွင် သူ့၌ တော်တော်ကြီး လေးလံလာသည်ဟု ခံစားရသည်။ ထို အရာတို့သည် သူ့ဆီသို့ နေ့စဉ် မနက်တိုင်း တွယ်ကပ်လေ့ရှိသည့် ကပ်ပါးကောင်းများပင်။ သူ့တွင် အရေးတကြီး ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ ဖုန်းသေးသေးလေးတစ်ခုလည်း ရှိသည်။ ထိုဖုန်းသည် သူဆီ တွယ်ကပ်နေလေ့ ရှိသဖြင့် နောက်ဆုံးတွင် ၄င်းကို လက်မခံတော့ချေ။
ဘယ်နယ့်ကွယ် လူဖြစ်ရတဲ့ ဒီဘဝမှာ တွယ်ကပ်နေသည့် ကပ်ပါးကောင်များ တလှေကြီးဖြင့် သူ့စိတ်ကို ရှုတ်ထွေး ပွေလီစေသည်။ အာရုံထွေးပြားစေသည်။ အရာရာကို ရှင်းလင်း သန့်စင်စွာ နေလိုသည့် သူ့စိတ်အာရုံကို ထိုကဲ့သို့သော ကပ်ပါးကောင်များကြောင့် နောက်ကျိမနေစေလို။ သူသည် အနှောင်အဖွဲ့မှ ကင်းလွတ်လိုသူ ဖြစ်သည်။ သူ၏ စိတ်အစဉ်တို့ကို ဝါဂွမ်းစ တစ်စလို့ နုညံ့ဖြူစင် စေလျက် ဘဝလေပွေ သယ်ဆောင်ရာသို့ ဝေ့ကာ လွင့်ကာဖြင့် ပေါ့ပါးသွက်လက်စွာ အသာအယာ စီးမျောသည်။
သူ့ဘဝတွင် ကပ်ပါးကောင်တို့သည် ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်း မှီတွယ်ငြိကြသည်။ ငယ်စဉ်တုန်းကတော့ ထိုကပ်ပါးကောင်းတို့ကို သိပ်ပြီး အလေးမထား။ အာရုံ မပြုမိချေ။ သို့ရာတွင် သူ့ဘဝသည် ရှေးရိုးဆန်ခြင်းနှင့် အချုပ်အနှောင် မလွတ်လပ်ခြင်းတို့ အောက်တွင် ကြီးပြင်းလာရသည့်အခါ လွတ်လပ်ခြင်းကို အသိလိုက် မသိဘာသာ တောင်းတသည်။ ထို့နောက် လွတ်လတ်ခြင်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရယူသည်။ အရာရာကို ရုန်းထွက် ဖောက်ထွင်းကာ ပုန်ကန်လိုသည့် စိတ်တို့ အမြဲရှိသည်။ ငှတ်တစ်ကောင်လို ဝေဟင်တွင် လေအဟုန် စီးကာ လွတ်လပ်သည့် အရသာကို ခံစားသည်။
သူမွေးလာပြီး တစ်နှစ်လောက် နေတော့ အမေက ခြူတွဲလောင်း ကလေးနဲ့ ခြေကျင်းလေး တစ်ခု ဘယ်ဘက် ခြေထောက်မှာ တပ်ပေးထားတယ်။ ဘဝမှာ ကနဦးဆုံး ကိုယ့် ခန္ဓ္ဓာကိုယ်မှာ တွယ်ကပ်လာတဲ့ ကပ်ပါးကောင် တစ်ကောင် ပေါ့။ သူကိုယ်တိုင်က အငြိမ်မနေ ဟိုလှုပ်၊ ဒီလှုပ်နဲ့ ဆိုတော့ အဲဒီခြူကပ်ပါးကောင်က တချွင်ချွင်နဲ့ အသံမြည်တော့တာပေါ့။ ကိုယ့် စိတ်အလို မပါပဲ မိဖတွေ၊ အဘိုးအဘွားတွေ၊ လူတွေကို ခြူလေး တွဲလောင်းကလေးနဲ့ ကလေးငယ်ဘဝကတည်းက ဖျော်ဖြေ ခဲ့ရတာပါ။ ချစ်စရာ ကလေးငယ် နဲ့ တချွင်ချွင် ခြူသံကို လူတွေက သဘောကျ ကြတယ်။ “ဟယ်..ခြူကလေးနဲ့ ချစ်စရာလေး” လို့ ပြောဆို မှတ်ချက်ချကြတဲ့ အသံရှင်တွေဟာ သူရို့အတွက်တော့ ကိုယ်ပိုင် စိတ်ချမ်းသာစရာ ပေပဲပေါ့။ သူကတော့ မသိ နားမလည်စွာနဲ့ ပဲ တအင်းအင်း တအဲအဲနဲ့ ခြေထောက်တုတ်တုတ်ကလေးတွေကို ဆတ်ကာ ဆတ်ကာနဲ့ တချွင်ချွင် အသံတွေပြုလို့။ သူ့မျက်လုံး ဝိုင်းဝိုင်းတွေမှာ လောကကြီး အကြောင်းကို နားမလည်ခြင်း များစွာနဲ့။ သူ့ကို အမှီပြုလို့ လူတွေ စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်မှုကို ရယူကြသည်။ သူကတော့ ဒီခြူ ကလေးကြောင့် ဉာဏ်ပညာတွေ ပိုမိုလို့ တိုးတက် မလားခဲ့ဘူး။ ဒီခြူ ကလေးကြောင့် ကျန်းမာ သန်စွမ်း အနာရောဂါ ကင်းတဲ့ ကလေး တစ်ယောက်လည်း မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ သူ့မှာသာ ခြူခြေကျင်းကပ်ပါးကောင် တစ်ကောင် ရလာခဲ့တယ်။ ဒါက သူ့ ရဲ့ မသိနားမလည်သေးတဲ့ မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ ပထမဦးဆုံး ပုံရိပ်ထင်လာတဲ့ ကားချပ်တစ်ခုပါ။
ကံကောင်းထောက်မစွာပဲ သူ့အသက် ငါးနှစ်ကျော် ခြောက်နှစ်လောက် ရောက်တော့ အဲဒီ ခြူကောင် မရှိတော့ဘူး။ လူတွေအတွက်တော့ သူဟာ ခြူနဲ့ မလိုက် မဖက်၊ ချစ်စရာ မကောင်းတော့ဘူး ထင်ပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် မူကြိုတန်း၊ မူလတန်း သွားရတော့ သူ့ ပုခုံးပေါ်မှာ အိပ်ကလေး တစ်လုံးက အမြဲတမ်း ကပ်ပြီး ပါလာရတယ်။ အိပ်ထဲမှာတော့ ကျောက်သင်ပုန်း နဲ့ ကျောက်တန်၊ ဖတ်စာအုပ် တစ်အုပ် ပါတယ်။ အဲဒီအိပ်ဟာ ခြူကပ်ပါကောင်ကနေ တဆင့်တက်လို့ အသွင်ပြောင်းသွားတဲ့ အိပ်ကပ်ပါးကောင်းတစ်ကောင်လို့ သူထင်နေတယ်။ သူဟာ အဲဒီ အိပ်ကပ်ပါးကောင်ကြီးနဲ့ပဲ အထက်တန်း ကျောင်းသားကြီး ဖြစ်တဲ့ အထိ ပုခုံးပေါ်မှာ အမြဲလွယ်ပြီး ကျောင်းတက်ခဲ့ရတယ်။
သူအထက်တန်း ကျောင်းတက်တော့ နောင်နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်နီးပါ တွယ်ကပ်နေမည့် ကပ်ပါးကောင် တစ်ထွေးကြီး သူ့ကို ငြိတွယ်ပါလေတော့သည်။ သူ့၏ ဘယ်ဘက်ကောက်ဝတ်တွင် အချိန်ကြည့်ရသည့်ကပ်ပါးကောင် တစ်ကောင် စတင်တွယ်ငြိလာသည်။ ထိုအကောင်သည် သူ့လက်တွင် နေ့စဉ်လိုလို တွယ်ကပ်နေလေ့ရှိသည်။ ရံဖန်ရံခါ ရေချိုးချိန် ညအိပ်ချိန် အထိ တွယ်ကပ်နေတတ်သည်။ တစ်စ တစ်စနှင့် ထိုအကောင်သည် အချိန်အပေါ် ထားရှိသည့် သူ၏ ယုံကြည်ချက်တို့ ကို ချိုးဖဲ့ ယူငှင်စားသုံးသွားသည်။ ထိုအကောင်ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှိနေသော အချိန်ဗေဒ နမိတ်ပုံတို့ကို သူလှစ်လျူ ရှုလိုက်တော့သည်။ လင်းအာရုံတက်ချိန် ကျေးငှက်သံတို့၊ အုံးမောင်းခေါက်သံ လင်းကြက်တွန်သံတို့ ဖြင့် နိုးထရခြင်းထက် နိုးစက်နာရီပေး ၍ နိုးထခြင်းအလုပ်ကို သူလေ့ကျင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မွန်းတည့်နေ ရာသီစက်ကွင်းတို့ဖြင့် သွားလာ လှုပ်ရှားရသည်ထက် သူ၏နာရီကပ်ပါးကောင်၏ စေခိုင်းရာ အချိန်စက်ဝန်းကို ရို့ကျိုးစွာ လိုက်နာခဲ့ရသည်။
သူငယ်စဉ်တုန်းက သူရို့ မိသားစု သည် အလင်းရောင်တို့ အနောက်ဝင်ရိုးစွန်းကို ကျော်လွန်၍ ကျေးငှက်တို့ အိပ်တန်းဝင်သည့် အချိန်ထိ အိပ်စက် နားခွင့် မရသေးချေ။ သူရို့ တစ်အိမ်လုံးကို တွယ်ကပ်နေသည့် ရုပ်မြင်သံကြား ကပ်ပါးတစ်ကောင်သည် သူရို့၏ စိတ်အာရုံ တစ်လုံးကို ချုပ်ကိုင် လွှမ်းမိုးထားသည်။ သြကာသ လောကတစ်ခွင်လုံး အိပ်စက်အနားကြရန် အလင်းရောင်တို့ ဆုတ်ခွာ ရုတ်သိမ်းပေးခဲ့သည့် တိုင်အောင် သူရို့ မိသားစုသည် ရုပ်မြင်သံကြား ကပ်ပါးကောင်၏ ညှို့စက်ကွင်းအောက်တွင် စပါးကြီးမြွေ အညှို့ခံထားရသည့် သားကောင်များ ပမာ မိန်းမော နေကြသည်။ ခက်တာက သူမွေးဖွားလာသည့် လူအဖွဲ့အစည်းတွင် လူတို့သည် ထိုကဲ့သို့သောကပ်ပါးကောင်ကိုမှ တပ်မက်တွယ်တာကြသည်။ သူ့၏ ပတ်ဝန်ကျင်ရှိ မိသားစုတိုင်းတွင်လည်း ထိုကဲ့သို့ ကပ်ပါးကောင်(household parasite) များ အနည်း နှင့် အများဆိုသလို မှီတွယ် ကပ်ငြိ နေတတ်ကြသည်။
မှတ်မှတ်ရရ သူ၏ အိမ်နံဘေးသို့ မိသားစု အသစ် လင်မယားတစ်စုံပြောင်းလာသည်။ မိန်းမဖြစ်သူက ယောကျာင်္းဖြစ်သူ အား “မောင်ရေ အိမ်ဆိုတော့ ဆိုဖာလေး နှင့် အမှီ ခေါင်းအုံးလေး ရှိမှ ဖြစ်မယ်”. လို့ ဆိုတယ်။ ယောကျာင်္းဖြစ်သူက “အေးပါကွ..မောင့်အတွက်လည်း ရုပ်မြင်သံကြား(တီဗွီ) နဲ့ အောက်စက် လေးပါ ဝယ်လိုက်မယ်”. အင်း တစ်ကယ်တော့လည်း ဆိုဖာတို့ တီဗွီတို့ဆိုတာ သူတို့ကို တွယ်ကပ်နေမယ့် ကပ်ပါးကောင်တွေက အဆင်သင့် ရှိနေကြတာ။ ဒါကို သူက ဆိုဖာကပ်ပါးကောင်(sofa parasite)များ နှင့် တီဗွီကပ်ပါးကောင်(TV parasite) များလို့ မြင်တယ်။ အောက်စက်လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ဒီဗွီဒီ ပလေရာ (DVD player), စီဒီ ပလေရာ (CD player) ဒါတွေဟာ ကပ်ပါးကောင်တွေပဲပေါ့။
သူ၏ လူ့ အဖွဲ့အစည်းတွင် မရေမတွက်နိုင်အောင် များပြားသော ကပ်ပါးကောင်များ နားခို ပေါက်ဖွား ကြသည်။ ၄င်းတို့သည် သူ၏ စိတ်ခွန်အားကို စမ်းသပ်ကြသည်။ ယူပါ ယူပါ တစ်စာစာနှင့် သူထံသို့ တွယ်ကပ်နိုင်အောင် ဘက်ပေါင်းစုံမှ နည်းမျိုးစုံဖြင့် စွဲဆောင် ညှို့ယူ ချဉ်းကပ်ကြသည်။ သူသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း ရေစီးကြောင်း အတိုင်း စီးမျောကာ ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း ယုံကြည်ချက်တို့ကို ကပ်ပါးကောင်များ နှင့် လှဲလှယ် ခဲ့သည်။ တနည်းအားဖြင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏ သယ်ဆောင်ရာ လမ်းကြောင်းအတိုင်လိုက်ရင်းဖြင့် သူ၏ ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းတို့အား ချဲ့ထွင် ဖောက်လုပ်ဖို့ မေ့လျော့ခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် အနှီးကပ်ပါးကောင်းတို့အား သူ၏ ဘဝလုပ်ငန်းဆောင်တာ များကို ထိန်းကွတ် ချုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့် ပေးအပ်ခဲ့သည်။
သူ၏ဘဝ ဆယ်သက်ကျော်သက် အရွယ် အားကစားတို့ လိုက်စား၍ ကိုယ်ခန္ဓ္ဓာကျန်းမာ သန်စွမ်းအောင် လုပ်ရမယ့် အချိန်တွင် သူသည် ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရုပ်ရှင် ကပ်ပါးကောင် တို့၏ တွယ်ကပ်မှုဖြင့် ဘဝ၏ နုပျိုသည့်အချိန်များစွာကို သာယာကိုခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် သူ၏ ဆံပင်ကို ရှည်လျား လာစေသော ကပ်ပါးရောပါပိုး တစ်မျိုးလည်း တွယ်ကပ်လာသည်။ ထို ကပ်ပါးရောဂါပိုးနှင့် အတူ ဆန်းပြားသော ခေါင်းလိမ်းဆီမျိုးစုံ၊ မှန်တစ်ချပ်၊ ဘီးကောင်းကောင်း တစ်လက်တို့ဖြင့် အမျိုးနွယ်သော ကပ်ပါးပိုးများပါ တွယ်ကပ်လာတော့သည်။ သူ၏ လက်ကောင်ဝတ်တွင်လည်း နာရီကပ်ပါးကောင် သည် တွယ်ကပ်လျက်ပင်။ အများသူငှာ၏ အလေးပေးမှု နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် လိင် မိန်းကလေးများ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ရယူလိုသည့် စိတ်တို့ ရှင်သန်လာသည်နှင့်အမျှ သူ၏မျက်လုံးတွင် အမည်းရောင်မှန်ချပ်ကြီးများနှင့်တူသော ကပ်ပါးကောင်တစ်ကောင်လည်း တိုးလာသည်။ သူသည် သွားလေရာရာတွင် သူ၏မျက်လုံးကို ထိုအမည်းရောင်မှန်ချပ် ကပ်ပါးကောင်ကြီးဖြင့် အုပ်ပြီး သွားသဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လှသည်ဟု အထင်ရောက်လေ့ရှိသည်။
ထိုအရွယ်သည် သူအတွက် ကပ်ပါးကောင်မျိုးစုံ ဝင်ရောက် တွယ်ငြိခဲ့သော အရွယ်ကာလ အပိုင်း အခြားလည်း ဖြစ်သည်။ သူ၏ စိတ်ခွန်အားတို့သည် ဆူလွယ်၊ နပ်လွယ်၊ ကျိုးလွယ်၊ ပဲ့လွယ်ကာ လေအပွေ့တွင် အလွယ်တကူ ကြွေဆင်းကျရသော သစ်ရွက်ခြောက်တို့ပမာ ရှိလှသည်။ လေပြေတို့ သယ်ဆောင်ရာ ဟိုရိမ်း ဒီယိုင် ဝေ့ကာ ဝိုက်ကာ ဘယ်ညာ ရိမ်းတတ်သော သစ်ရွယ်ငယ်တို့ ပမာ စိတ်အစဉ်တို့ ရိမ်းထိုး ပြောင်းလဲနေတတ်သည်။ ထို ကဲ့သို့ မတည်ငြိမ်ခြင်း စိတ်အလျင်ကို အခွင့်ကောင်း ယူလျက် ထိုးဖောက် တွယ်ငြိလာသော ကပ်ပါးကောင်တို့ကား မနည်းလှချေ။ လက်ခံကောင်ကို အကျိုးပြုမည့် ကပ်ပါးကောင်းလော၊ ဆိုးကျိုးပေးမည့် ကပ်ပါးကောင်းလောဆိုတဲ့ ဝေဖန်ပိုင်ခြားနိုင်စွမ်း သူမရှိခဲ့ချေ။
နှစ်ကာလ သုံးဆယ်ကျော် ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးနောက် သူတွင် ဘဝက ပေးအပ်သည့် လုပ်စရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ တစ်နင့် တစ်ပိုး ရှိလှသည်။ သူ့ ဘဝ ဖြတ်သန်းခဲ့သည် ခရီးတစ်လျှောက်တွင် လုပ်ချင်တာတွေ၊ လုပ်ရမှာတွေ၊ လုပ်သင့်တာတွေ ကို ခွဲခြမ်း စိပ်ဖြာ စီမံခန့်ခွဲရသည်။ သူ့တွင် ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းကို ဝေဖန်ပိုင်းခြား နိုင်စွမ်း အသိပညာတို့ဖြင့် ခိုင်မာ ရင့်ကျက်လာခဲ့သည်။ သူ့အတွက် လိုအပ်သော ကပ်ပါးကောင်များကို မွေးမြူသည်။ မလိုအပ်သော ကပ်ပါးကောင်များကို ရှင်းလင်း သုတ်သင်သည်။ တကယ်တော့ လက်ခံကောင် သည် အခရာ ပင် မဟုတ်ပါလော။
လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်ခန့်က စ၍ သူ၏ ဆံပင်ကို ရှည်လျားစေသော ကပ်ပါးကောင် တစ်မျိုးကို သုတ်သင်ပစ်နိုင်သည့် အခြားကပ်ပါးကောင် တစ်ကောင်ကို ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ထိုကပ်ပါးကောင် ရှိသည့်နေမှစ၍ သူ၏ ဆံပင်တို့သည် အမြဲ တိုတိုပဲရှိခဲ့သည်။ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ဘက်ကို ခြေဦး မလှည့်သည်မှာ ခုနစ် နှစ်ခန့် ရှိရော့မယ်။ သူလို လူမျိူး များများ ရှိလျင် အမျိုးသား ဆံပင် ညှပ်ဆရာတို့ စီပွားပျက်ကိန်း ရှိအံ့။ ခေါင်းလိမ်းဆီ၊ မှန်၊ ဘီး ကဲ့သို့သော ကပ်ပါးကောင်တို့ သူ့ဘဝတွင် သေဆုံးသွားခဲ့သည်။
ထို့ အပြင် တီတီ တီတီ အသံပေးကာ ရေချိုးခန်းဝင် လည်း စိတ်မဖြောင့်ရ၊ အိမ်သာတက်လည်း စိတ်မဖြောင့် စေတတ်သော၊ တယ်လီဖုန်းကပ်ပါးကောင်ကို အမြစ်မှ သုတ်သင် ရှင်းလင်း ပစ်နိုင်ခဲ့သည်။ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြီးထွား ရှင်သန် ပေါက်ဖွားနေသော ဖုန်ကပ်ပါးကောင်သည် ဟိုသွားလည်း ဒင်းကိုသယ် သွားရ။ ဒီသွားလည်း ဒင်းကိုသယ်သွားရ ဆိုတော့၊ သူ့အတွက် အပို အလုပ်တွေ ဖြစ်လာသည်။ သူ သည် စိတ်အာရုံကို ရှင်းလင်းလိုသူဖြစ်သည်။ ဘယ် နှင့် ညာ ခွဲခြားဖို့ သုံးစက္ကန့်လောက် အချိန်ယူ စဉ်းစားရသည့် သူ၏ စိတ်အာရုံ အားနည်းချက်အတွက် ဖုန်းကပ်ပါးကောင် တစ်ကောင်ကြောင့် အပို အာရုံမများလို။ သို့ဖြင့် ၄င်းဖုန်း ကပ်ပါးကောင်းကိုလည်း ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။
သူ သွားလာ လှုပ်ရှား နေရသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အချိန် နာရီတို့သည် ပေါများ လှပေသည်။ လူတိုင်းလိုလို၏ လက်ကောင်ဝတ်တွင် နာရီကပ်ပါးကောင်တို့ တွယ်ငြိနေတတ်သည်။ သို့တည်းမဟုတ် တစ်နေရာရာ၊ နံရံတစ်ခုခုတွင် ၄င်းကပ်ပါးကောင်တို့ ကပ်နေတတ်သေးသည်။ စားသောက်ဆိုင်၊ မော်တော်ကား၊ ဘူတာရုံတို့၏ နေရာ၊ တိုင်၊ ထုတ်တန်းတို့တွင် သူရို့ မှိခိုနေတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူ့လက်ကောင်ဝတ်တွင် နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ခန့် တွယ်ငြိနေခဲ့သော နာရီကပ်ပါးကောင်ကို ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။ အပြင်ထွက်သည့် အခါတိုင်း၊ အလုပ်သွားသည့် အခါတိုင်းတွင် သူ၏ လက်တို့ ပေါ့ပါး သွက်လက်လာသည်။
သူ့အိမ်တွင် စာပွဲတစ်လုံးနှင့် ထိုင်ခုံ နှစ်လုံး ရှိသည်။ သူ့နှင့် သူဇနီး ထိုင်ဖို့ဖြစ်သည်။ ဧည့်လာလျှင် အားလုံး ကြမ်းပြင် ၌ လွတ်လပ်စွာ ထိုင်ကြသည်။ အလင်းရောင်တို့ အတား အဆီး မရှိ အတင်း တလဟော သူရို့နေသည့် အခန်းများသို့ လှိမ့်ကာ လှိမ့်လာ တိုးဝင်ကြသည်။ သူရို့သည် အိမ်ထောင် ပရိဘောက ကပ်ပါးကောင်များကို ကြောက်ကြသူလည်းဖြစ်ကြသည်။ တကယ်တော့ သူသည် ကပ်ပါးကောင် ကြောက်သူ ဖြစ်သည်။